Ch3यूहन्ना – 2माछा
घर / बाइबल / यूहन्नाको सुसमाचार / Ch3यूहन्ना
3:2 He went to Jesus at night, र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो: "रब्बी, we know that you have arrived asateacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 येशूले जवाफ र उहाँलाई भने, "Amen, amen, म तपाईंलाई भन्न, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How couldaman be born when he is old? निश्चय, he cannot enterasecond time into his mother’s womb to be reborn?"
3:5 येशूले जवाफ: "Amen, amen, म तपाईंलाई भन्न, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:10 येशूले जवाफ र उहाँलाई भने: “You areateacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 Amen, amen, म तपाईंलाई भन्न, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:13 अनि कुनै एक स्वर्ग जानुभयो छ, स्वर्गबाट ​​descended गर्ने एक बाहेक: स्वर्गमा छ जसले मानिसको पुत्रलाई.
3:14 मोशाले मरुभूमि मा सर्पले उचालिनुभयो र बस रूपमा, त्यसैले पनि मानिसको पुत्र उचालिनुभयो हुनुपर्छ,
3:15 भनेर जसले उसलाई नष्ट हुन सक्छ विश्वास, तर अनन्त जीवन हुन सक्छ.
3:16 परमेश्वरको लागि त उहाँले आफ्नो प्यारो छोरा दिनुभएको संसारमा प्रेम, त्यसैले उहाँलाई विश्वास गर्ने सबै नष्ट गर्न सक्छ कि, तर अनन्त जीवन हुन सक्छ.
3:17 परमेश्वरले संसारमा आफ्नो पुत्रलाई पठाउन गर्नुभयो लागि, संसारको न्याय गर्न, तर क्रम मा संसारको उहाँलाई माध्यम मुक्ति पाउन सक्छ भनेर.
3:18 उसलाई न्याय छैन मा जसले विश्वास गर्छ. तर पहिले नै न्याय छ जसले विश्वास गर्दैन, उहाँले परमेश्वरको एक मात्र छोराको नाममा विश्वास छैन किनभने.
3:22 यी कुराहरू गरेपछि, येशू र उहाँका चेलाहरू यहूदियामा भूमि गए. र उहाँले तिनीहरूलाई त्यहाँ जीवित र बप्तिस्मा थियो.
3:23 अब यूहन्ना पनि बप्तिस्मा थियो, Salim नजिकै Aenon मा, किनभने त्यहाँ ठाउँमा धेरै पानी थियो. र तिनीहरूले आइपुगेपछि थिए र बप्तिस्मा.
3:24 जन लागि अझै जेल हालिन्छ भएको थिएन.
3:25 त्यसपछि विवाद यूहन्ना र यहूदीहरूको चेलाहरू बीच भयो, शुद्धीकरण बारेमा.
3:26 र तिनीहरूले यूहन्नालाई गए र उहाँलाई भने: "रब्बी, यर्दन मार्फत तपाईंसँग गर्ने थियो एक, जसलाई बारेमा गवाही प्रस्ताव: हेर, उहाँले बप्तिस्मा छ र सबैलाई उसलाई जा रहेको छ। "
3:27 जन प्रतिक्रिया र भन्नुभयो: "एक मानिस छैन केहि प्राप्त गर्न सक्षम छ, यसलाई स्वर्गबाट ​​उहाँलाई दिइएको छ नभएसम्म.
3:28 तिमीहरू मेरो लागि गवाही प्रस्ताव म भने, 'म ख्रीष्ट हुँ,'तर म उहाँलाई अघि पठाइएको छ कि.
3:29 दुलही धारण गर्ने उहाँले दुलहा छ. तर दुलहा को मित्र, जो खडा र उहाँलाई सुन्नुहुन्छ, दूल्हा को आवाज मा खुसीसाथ rejoices. अनि त, यो, मेरो आनन्द, पूरा भएको छ.
3:30 उहाँले वृद्धि हुनुपर्छ, जबकि म कम पर्छ.